Rhapsody of Realities hwesa
Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona
Chenjerera Mafungirhe ako unaita
"Adati kwawo wari:Chinyi chinakud'yani mwoyo?.Senyi muchifunga zvizhinja mumwoyo yanu?"(Ruka 24:38).
Wanhu wazhinji hawachenjereri mafungirhe awo wanaita.Wanafunga nanzira iribe kudeka.Mfungwa zamunhu zinafanirha kurungwa.Zinarungwa nasoko raMwari.Zvikareka kudaro zinafunga zvinhu zvanhando.Kuna zina mpfungwa zinandoona zviribe kudeka basi.
Pena pangaikhwe mitemo mipsa.Wena wanhu wanabva waona fanike mitemo iyi yaikhirha iwo.Wananga wachiona fanike mitemo yi yauya kudzawavhiringiza.Saka wanagara wachifungira wena.Paribe munhu wawo wanaona fanike mhusvinu.Ndiko kufunga kwawo wanaita.Ndiwo maonerhe awo wanaita zvinhu.
Wanhu wadadari wanapusa kutooaneka muchechi.Wina anapusa kutoteteka mharidzo.Anabva afunga kuti mufundisi arikutoparidza iye.Saka anabva atoreka kuuya kuchechi.Wina anapusa kubva mharidzo ibodziyo achibva atoti "ndidauya kuchechi.Ndichibva ndabva soko richitaura nazvangu.Mufundisi arikutaura zvinhu zvirikundishupa chaizvo.Saka ndadikugadzirisa upenyu hwangu".
Wawiri awa wananga wabva soko ribodzibodziro.Wina bvaafunga kusiya chichi.Wina achisarudza kuramba ari mucheche imomu.Ananga atoona soko richimuitira zvisvinu.Wanhu wawiri awa wadasiyana pachinyi.Wadasiyana mafungirhe awo.Saka mafungirhe ako anapusa kuti uite munhu anabudirira.Anapusawo kuita kuti uthowerhe naupenyu.Ndipo munaona tichigara tichedza kuskatura mpfungwa zathu.Tinagara tichizisimudzira.Tinazidetsa nasoko raMwari.Izvi ndizvo zvathu tinaona muna WaRoma 12:2.
Saka unafanirha kutsandura mafungirhe ako unaita.Ukareka kudaro upenyu hwako hahutsanduki ba.Sarudza kufunga zvinhu zvidadeka.Sarudza kufunga zvidaskatuka.Chenjerera mpfungwa zako.Usazireki zichifunga zvidanyangara.Usareki zichiona zvinhu zviribe kudeka.Mwari wanantsimba zawo wadatipa.Izi ndintsimba zakukhatha zvinapinda mumpfungwa zathu.Saka tinapusa kusarudza kutambira mpfungwa zidanyangara. Asi tinapusawo kuzitandira kuti zireke kupinda mumpfungwa zathu.Saka funda kufunga zvinhu zvidadeka.Usatandaziwi nampfungwa zidanyangara mumusoro mwako.Izvi ndizvo zvathu tinaona muna WaFiripi 4:8. Inati, "Pakupezisira nkhama zangu,zventse zvachadi,zventse zvinapiwa khodzo,zventse zvidarurama,zventse zvidachena,zventse zvinadiwa,zventse zvinakodzgha,kuri kupizvako,kanachinarambizgha chipi nachipi,funga chaizvo nazvacho".
Mpfungwa zangu zidadzara nzero zidadeka.Ndinagara ndichizviona ndichibudirira.Ndinazviona ndichigara ndichikunda.Handireki mpfungwa zidanyangara zichipinda mumusoro mangu.Handizvioni fanika munhu aribe kubudirira.Mweya Mupsene ndiwo unandibatsira.Unandipa mpfungwa mpsinu.Wanaita kuti nditaure masoko adadeka.Unaita kuti ndiite zvinhu zvinafanira kuitka.Mwari ngaapiwe khodzo!
Zinango Ndima Zinatsigira Kufunda KwaNyamuntsi
VaFiripi 4:8 AMPC
Rhapsody of Realities (Hwesa)
Chishanu, 8 Mbudzi 2019)